डा. भट्टराईको आरोप : ‘प्रचण्ड र विप्लव दुवै गलत बाटोमा हुनुहुन्छ’
मुख्य पृष्ठराजनीतिडा. भट्टराईको आरोप : ‘प्रचण्ड र विप्लव दुवै गलत बाटोमा हुनुहुन्छ’
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ दुवै गलत बाटोमा रहेको टिप्पणी दिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् यस्तो टिप्पणी दिएका हुन् । शुक्रबार बिहान एक ट्वीट गर्दै भट्टराईले भनेका छन्, ‘भनिन्छ नि, दुईवटा गलतले एउटालाई कदापी सही बनाउन सक्दैन । पूर्व क.प्रचण्ड र विप्लव दुवै गलत बाटोमा हुनुहुन्छ र एकअर्कालाई संगीन आरोप लगाइरहनुभएको छ । समस्या व्यक्तिको नभएर विचारको हो । यो दन्तबझान संसदीय कम्युनिज्म र उग्रपन्थी कम्युनिज्मबीचको हो । इतिहासले दुवैलाई गलत सावित गरिसकेको छ । खाँचो नयाँ विचारको हो ।’